Ogaden News Agency (ONA) – Falastiiniyiin La Xasuuqay & Safaaradii Maraykanka oo Qudus Laga Yagleelay.
Falastiiniyiin La Xasuuqay & Safaaradii Maraykanka oo Qudus Laga Yagleelay.
Posted by ONA Admin	/ May 15, 2018
Sida ay kusoo waramayaan warbaahinta caalamiga ah, ugu yaraan 37 qof oo Falatiiniyiin ah ayay ciidammada Israa’iil ku toogteen marinka Qaza taas oo noqotay toddobaadkii ugu dhiiga badnaa, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta.
Rabshadahani ayaa imaanaya xilli magaalada Qudus shalay uu Mareykanku safaarad ka furanayo taas oo ka cadhaysiisay shacabka Falastiiniyiinta. Ururka Xamaas ee ka talliya marinka Qaza ayaa waday dibadbaxyo ay ugu magac dareen dibadbaxyadii soo celinta kaas oo socday muddo lix toddobaad ah.
Israa’iil waxay sheegtay in dibadbaxyaashu ay burburinayaan xayndaabka xadka. Ciidammada Israa’iil waxa ay sheegeen in illaa 35,000 oo falastiiniyiin ah ay ka qayb qaadanayaan isu soo baxyada rabshadaha wata.
Dadka shalay lagu dilay dibadbaxyada waxaa kamid ah carruur halka in ka badan 1000 qof ay ku dhawaacmeen sida ay sheegtay laan arrimaha caafimadka ka shaqaysa oo taabacsan Xamaas. Heshiis dhexmaray Israa’iil iyo Falastiiniyiinta sanadkii 1993-dii ayaa waxa uu dhigayaa in meeqaamka Qudus laga wada xaajoodo marar kale.
Rarista safaarada Maraykanka ayaa ah guul weyn oo usoo hoyatay Ra’isulwasaare Netanyahu iyo Dadka Yuhuuda ah ee ku dhaqan magaalada Tel Aviv ayaa ammaanay madaxweyne Trump, iyada oo la taagay tabeelooyin lagu bogaadinayo. Furitaanka safaaradda ayaa horey loosoo dhigay si loo waafajiyo maalinta loo dabaaldagayo sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegtay markii la asaasay Israa’iil.
Hoggaamiyaha reer Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa go’aanka Trump ku tilmaamay “Dharbaaxadii Qarniga”, isaga oo intaas ku daray in wixii hadda ka dambeeya uusan Maraykanka ahaan karin dhexdhexaad arrimaha Bariga Dhexe.